Mhlawumbe uzwile ngamafomethi wevidiyo adumile njengeMP4, AVI, MOV, njll., kodwa bambalwa kakhulu abantu abazi isandiso sefayela le-TS. Leli yifayela lohlobo lwamafayela evidiyo elisetshenziswa kakhulu ezinhlelweni zokusebenza zanamuhla. Ake sifunde ngefomethi ye-TS ne-Mobile World ngokusebenzisa isihloko esingezansi!
1. Liyini ifayela le-TS?
I-File TS noma i-File Transport Stream ifomethi yesandiso yevidiyo esetshenziselwa ukugcina amavidiyo ku-DVD, cindezela i-MEPG-2 idatha yevidiyo evamile (.MPEG), ilondoloze amavidiyo asakazwayo, nokunye okwengeziwe.
Amafayela okuthutha amavidiyo efomethi ye-TS agcinwe ku-DVD azodlala kusidlali se-DVD ngaphandle kwesofthiwe eyengeziwe. Njengamanje, izingosi zamamuvi e-HD zivame ukusebenzisa isandiso sefayela le-TS ukuze zidlulisele i-H264, zilayishe kumafayela amaningi amancane e-TS.
Ifayela TS noma i-File Transport Stream iyifomethi yesandiso sevidiyo
Ifayela le-TS livame ukusetshenziselwa ukusakazwa kwekhwalithi ephezulu ye-Definition TV futhi lidalwe ngokuyinhloko ukudlulisa ukusakazwa okuhambisanayo. Le fomethi iwuhlobo olufushane lwesistimu yokuthutha ividiyo futhi iyisakhiwo sefolda yefilimu ye-DVD. Ifayela le-TS kumadiski e-DVD liqukethe lonke ulwazi lwediski okuhlanganisa nefayela eliyisipele (.BUP), into yevidiyo (.VOB) kanye nolwazi lwefayela (.IFO).
I-TS isetshenziselwa ukugcina nokudlulisa idatha yomsindo nevidiyo.
I-TS isetshenziswa ezinhlelweni zokusakaza ezifana ne-ATSC ne-DVB, Iphakethe, i-PID, Uhlelo Lwemephu Yethebula, i-PSI, i-PAT, Ukufinyelela Okunemibandela, i-PCR, njll.
– Uma egcinwe kusidlali se-DVD, amafayela e-TS angabukwa ngaphandle kokusebenzisa noma iyiphi isofthiwe eyengeziwe.
Amafayela e-TS ajwayele ukusetshenziselwa ukusakaza i-Definition TV
2. Ungalivula kanjani ifayela le-TS
Amafayela e-TS kukhompuyutha angavulwa ngenani lezidlali zemidiya ezitholakala kudivayisi, isoftware efakwe ngaphandle efana neVLC media Player, tệp tin Viewer ye-Android, iRoxio Creator NXT Pro 7, iCorel VideoStudio 2019, Audials One 2019,…
Ukuvula ifayela le-TS kukhompyutha yakho, ungalandela lezi zinyathelo:
Chofoza kwesokudla Ifayela le-TS ukuvula > Khetha Vula nge > Khetha isofthiwe ofuna ukuyisebenzisa kuqedile.
Ungalivula kanjani ifayela le-TS kukhompyutha
3. Isofthiwe yokuvula amafayela e-TS
Isidlali semidiya ye-VLC
I-VLC truyền thông Player uhlelo lokusebenza oluvumela ukubuka amamuvi futhi ujabulele umculo ngamafomethi amaningi ahlukene, ukuhlanganisa izici eziningi ezithakazelisayo njengokuguqula amafomethi wemidiya, ukusakaza ividiyo nge-inthanethi, ukuqopha isikrini seDesktop, ukubuka amavidiyo ku-Youtube, ukwazi ukulawula kude, ukulalela. Emsakazweni eku-inthanethi, lalela ama-Podcast, engeza imiphumela yevidiyo neyomsindo, setha ividiyo njengephephadonga ledeskithophu.
– Izici eziphawulekayo:
+ Isekela ividiyo yekhwalithi ephezulu nokudlalwa komsindo.
+ Sekela ukubukela i-TV ku-inthanethi.
+ Sekela ukuzungezisa ividiyo ehlehlayo.
+ Isekela izinqamuleli zekhibhodi eziningi.
+ Dlala amafomethi e-CD / DVD / Blu-ray disc ngempumelelo.
+ Isekela amafomethi amaningi wevidiyo nawomsindo njenge-AVI, MKV, RM, RMVB, FLV, MP4, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, AC3, DTS, AAC, WMA 7, 8, OGG, MP3, MP2, WMA, FLAC, M4A,…
I-VLC truyền thông media Player uhlelo lokusebenza olukuvumela ukuthi ubuke amafilimu futhi ujabulele umculo ngamafomethi amaningi ahlukene
I-Corel VideoStudio Ultimate
I-Corel VideoStudio Ultimate isofthiwe yokuhlela ividiyo nokwenza amamuvi enezici eziningi ezichwepheshile, inguqulo Yakamuva ye-Corel VideoStudio – elinye lamathuluzi angcono kakhulu atholakalayo namuhla elinikeza abasebenzisi amathuluzi okudala angenamkhawulo.
I-Corel VideoStudio Ultimate ivumela ukushisa ividiyo ehleliwe kudiski ye-DVD usebenzisa ithuluzi lokugunyaza elakhelwe ngaphakathi.
+ Hlela amavidiyo, engeza imiphumela kanye noshintsho lweDVD.
+ Imingcele eminingi yokuhlela ividiyo.
+ Ngenisa amafayela alalelwayo namavidiyo amafomethi amaningi
+ Inqolobane yemiphumela yoguquko, izihlungi ezicebile.
+ Londoloza ividiyo ehleliwe ngamafomethi ahlukahlukene.
+ Isethi ephelele yamathuluzi okuhlela amavidiyo afaka: ibhalansi ezenzakalelayo, i-anti-shake, Isitika se-AR…
+ Ivumela ukuthatha izithombe, ukuqopha isikrini.
+ Izihlungi ezingaphezu kuka-2000 ezenziwe ngokwezifiso, ama-premium amaningi, imiphumela ekhethekile.
I-Corel VideoStudio Ultimate isofthiwe yokuhlela ividiyo
I-CyberLink PowerProducer iyithuluzi lokukusiza ukuthi uzenzele amavidiyo akho noma uhlele amavidiyo akhona ekhompyutheni yakho, uwagcine kumafomethi wevidiyo ahambisanayo ukuze ashise ku-DVD, VCD, Blu-ray discs, njll. Uhlelo luhlinzeka ngemiphumela eminingi. , isekela ukusebenza ngamafomethi wevidiyo okufakwayo njenge-AVI, FLV, MKV, MPEG, MP4, TS, njll.
+ Isekela iningi lamafomethi wevidiyo wokufaka ahlukene.
+ Sekela ukusebenza ngamavidiyo e-3D.
+ Faka umsindo njengomculo wangemuva.
+ Dala umbukiso wesilayidi ezithombeni ezivela ezinhlotsheni ezihlukene zamakhamera.
+ Shisa ividiyo ngqo ezinhlotsheni ezahlukahlukene zamadiski.
+ Hlela ividiyo ngqo ngemva kokuba isishisiwe.
I-CyberLink PowerProducer iyithuluzi lokukusiza ukuthi uzenzele amavidiyo akho noma uhlele amavidiyo
4. Isofthiwe esekela ukuguqula amafayela e-TS
Isofthiwe engaxhunyiwe ku-inthanethi
Umdali we-NXT Pro 4
I-Creator NXT Pro 4 iwuhlelo olubanzi oluvumela abasebenzisi ukuthi bagcine futhi babelane ngamavidiyo edijithali, umculo nezithombe ngendlela abafuna ngayo, basekele ukuhlelwa kwemidiya exubile, baguqule ividiyo ye-DVD ibe ifomethi ye-DVD. Ifomethi ebaluleke kakhulu ukuze ivuleke kalula kumaselula, amaphilisi.
+ Hlela amavidiyo ajwayelekile (i-SD) namavidiyo we-HD.
+ Sekela ukulanda amavidiyo asakazwayo kuwebhu.
+ Guqula amavidiyo e-DVD, amavidiyo ewebhu abe yifomethi ekhethwayo ukuze uvuleke kalula kumadivayisi eselula akamuva namathebulethi.
+ Dala i-DVD ngesitayela saseHollywood.
Umdali i-NXT Pro 4 uhlelo lokusebenza oluphelele
I-Freemake Free đoạn phim Converter
I-Freemake Mahhala Isiguquli Sevidiyo iyisoftware yamahhala enwetshiwe ene-interface elula, esebenziseka kalula. Le software ivumela ukuguqula amavidiyo anamafomethi ahlukene angaphezu kuka-500 futhi yenza izici eziningi ezivelele enqubweni yokwandisa ividiyo njengokusika, ukuhlanganisa, ukususa nokushumeka amavidiyo emakhasini ewebhu.
Ngaphandle kwalokho, I-Freemake Mahhala Isiguquli Sevidiyo Iphinde ikuvumela ukuthi ulande amavidiyo eziteshini eziningi ezinkulu njenge-YouTube, Vimeo, Dailymotion, njll.
Xem thêm: Injunctive Relief Là Gì - Hay 6 Common Examples Of 6
+ Ingasebenza kumadivayisi amaningi ahlukene njenge-smartphone, i-PSP, i-Xbox, i-smartwatch, njll.
+ Isekela amafomethi okokufaka angaphezu kuka-500, okungamavidiyo adumile anjenge-AVI, MP4, MKV, WMV, MOV, … namafomethi omsindo anjengeMP3, AAC, WMA, WAV, njll.
+ Sekela ukulanda amavidiyo kumawebhusayithi amaningi aku-inthanethi.
+ Ivumela abasebenzisi ukuthi baklebhule i-DVD kumafomethi wevidiyo adumile.
+ Isekela ukushiswa kwamadiski e-DVD ngomthamo omkhulu, akunamkhawulo wesikhathi futhi kungakha amakhophi evidiyo njengamafayela esithombe se-ISO.
I-Freemake Free video Converter iyisoftware yamahhala yokunweba ividiyo
Wondershare đoạn clip Converter Ultimate
Wondershare clip Converter Ultimate iyithuluzi elihlangene elivumela abasebenzisi ukuguqula amafomethi wevidiyo futhi bahlele amavidiyo njengokusika, ukuhlanganisa, ukunyakaza noma ukwengeza imiphumela, imibhalo engezansi, njll. Ngaphezu kwalokho, isofthiwe ingaguqula amafomethi. I-SD, HD ividiyo kunoma iyiphi ifomethi ethandwa izidlali zomculo eziphathekayo. Noma amadivaysi aphathekayo afana ne-iPod (Classic, Nano và Touch), iPhone, táo TV, Zune, PSP, Pocket PC, Creative Zen, Archos,…
+ Isekela ukuthi uguqule amafomethi wefayela levidiyo ukuze uwadlale kumadivayisi esidlali somculo, kumadivayisi eselula.
+ Sekela ukuhlela iziqeshana zevidiyo ezinjengalezi: ukusika, ukuhlanganisa, ukwengeza imiphumela, imibhalo engezansi, …
+ Ivumela ukuxhuma, ukukopisha amafayela amaningi noma ukuwasika abe yizicucu ezincane.
+ Ukusekela ukusetha ukushiswa kweDVD futhi uzidlale.
Wondershare đoạn clip Converter Ultimate kuyinto Umbuso compact
I-Convertio uhlelo lokusebenza lokuguqulwa kwefomethi yefayela eliku-inthanethi elisekela amafomethi amaningi ahlukene kusukela kumbhalo, izithombe, amavidiyo, njll. Ikakhulukazi, i-Convertio ihlanganiswe ne-Dropbox, izinsiza zesitoreji samafu se-Google Drayivu ukuze sithathe ifayela lokuqala futhi silondoloze ifayela okuyiwa kulo ngemva kokuguqula. Ngaphandle kwalokho, i-Convertio inamanye amathuluzi amaningi awusizo njengokuqaphela umbhalo ezithombeni.
– Izici ezibalulekile:
+ Mahhala, isekela Vietnamese, akukho akhawunti edingekayo.
+ Isekela izinhlobo ezahlukahlukene zokuguqulwa ezingaphezu kuka-25600 phakathi kwamafomethi wefayela ahlukene angaphezu kuka-300.
+ Ukusebenza okusheshayo nokulula.
+ Konke ukuguqulwa kwenzeka efwini futhi akudli noma yiziphi izinsiza ezivela kukhompyutha.
+ Sekela izinketho ezithuthukile zefomethi ngayinye yokuguqulwa.
+ Vikela amafayela ngokususa amafayela alayishiwe ngokushesha nangemva kwamahora angama-24 ngamafayela aguquliwe.
+ Isekela wonke amapulatifomu ngesiphequluli.
Ukufinyelela I-Convertio LAPHA.
I-Convertio uhlelo lokusebenza lokuguqulwa kwefomethi yefayela eku-inthanethi
I-Onlineconvertfree iyisiguquli sefomethi ye-inthanethi samahhala esisekela amafomethi amaningi, kufaka phakathi imibhalo, izithombe, amavidiyo. Kuyinto elula kakhulu ukuyisebenzisa, vele ukhethe ukulayisha ifayela noma ukulanda kusuka lapho, bese usetha ifomethi yefayela eguquliwe (ifomethi yokuphuma).
+ Guqula amafayela anjengezithombe, amavidiyo, amadokhumenti, okulalelwayo.
+ Isevisi yamahhala yokuguqulwa kwe-inthanethi.
+ Isekela amafomethi angaphezu kuka-200.
Ukufinyelela Onlineconvertfree LAPHA.
I-Onlineconvertfree iyisiguquli sefomethi eku-inthanethi
5. Ungawaguqula kanjani amafayela e-TS
Guqula amafayela e-TS abe yiMP4, MP3 (Ku-inthanethi)
Ukuguqula i-TS ku-inthanethi kukunika izinzuzo eziningi njengokuthi asikho isidingo sokulanda isofthiwe, isikhathi sokuguqulwa esisheshayo lapho ulanda isofthiwe. Nokho, ukuze ushintshe umsila ku-inthanethi kudinga idivayisi yakho ukuthi ixhumeke ku-inthanethi.
Ukuguqula amafayela e-TS abe yiMP4, MP3, ungakwenza ngalezi zinyathelo ezingezansi:
Isinyathelo 1: Iya ku-Convertio LAPHA.
Isinyathelo sesi-2: Chofoza Khetha ifayelabese ukhetha amafayela e-TS ozowadlulisela.
Chofoza okuthi Khetha ifayela, bese ukhetha amafayela e-TS ozowadlulisela
Isinyathelo sesi-3: Khetha Guqula.
Isinyathelo sesi-4: Ngemva kokwenziwa kokuguqulwa, cindezela Landa ukuze ulondoloze ifayela kukhompyutha yakho.
Ngemva kokuqedwa kokuguqulwa, chofoza okuthi Landa ukuze ulondoloze ifayela kukhompyutha yakho
Dlulisa amafayela e-TS ngesoftware ye-Wondershare (Okungaxhunyiwe ku-inthanethi)
Isinyathelo 1: Vula isofthiwe Wondershare video Converter Ultimate kukhompuyutha.
Uma ikhompyutha yakho ingenayo isofthiwe, ungalanda futhi ufake Wondershare đoạn clip Converter Ultimate kukhompyutha yakho LAPHA.
Isinyathelo sesi-2: Chofoza phakathi kwesoftware ukwengeza isandiso sefayela levidiyo i-TS.
Chofoza phakathi nesofthiwe ukuze wengeze ifayela levidiyo le-TS
Isinyathelo sesi-3: Shintsha inkomba yokuphumayo okwevidiyo ku Ithagethi.
Shintsha inkomba yokuphumayo yevidiyo kokuthi Ithagethi
Isinyathelo sesi-4: Khetha umcibisholo kokuthi Ithagethi ukushintsha ifomethi yevidiyo ephumayo.
Khetha umcibisholo kokuthi Ithagethi ukuze uguqule ifomethi yevidiyo ephumayo
Isinyathelo sesi-5: Linda isofthiwe layisha amavidiyo namafomethi > Cindezela Guqula.
6. Eminye imibuzo ehlobene ne-TS
Kungani ifayela le-TS lingavulwa?
Mhlawumbe usitolika kabi isandiso sefayela futhi uphatha uhlobo lwefayela oluhlukile njengefayela le-TS, okubangela ukuthi ifayela lingavulwa ezinhlelweni noma kuma-software.
Xem thêm: Định Nghĩa Frequency Division Multiple Access ( Fdma Là Gì ?
Kungenzeka yini ukusebenzisa amafayela e-TS nge-Visual Studio?
Ungasebenzisa amafayela e-TS ngohlelo lweMicrosoft Visual Studio ngokufaka i-TypeScript SDK ye-Visual Studio noma le plug-in ukuze uvule amafayela e-TS ku-Eclipse.